constant - Synonyms of constant | Antonyms of constant | Definition of constant | Example of constant | Word Synonyms API | Word Similarity API
Top 10 similar words or synonyms for constant
Top 30 analogous words or synonyms for constant
အင်ဗာတာ constant voltage ဟာ constant-voltage link မှတစ်ဆင့် converter2 ဆီသို့ စီးဝင်ပြီး phase တစ်ခုပြီးတစ်ခု အစီအစဉ်တကျ အဖွင့် အပိတ်လုပ်ပေးခြင်း အားဖြင့် 3phase မော်တာ ဆီသို့ ဆက်သွယ်ပေး ပါတယ်။
Class(ကွန်ပျူတာ) အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ကလပ်စ်တစ်ခုတွင်တွင် အင်းစတန့်စ်၏ ပိုင်ဆိုင်သင့်သော အချက်အလက်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက် မက်သတ်）များကို ရေးသားထားပါသည်။ အသုံးပြုနိုင်သော အချက်အလက်များကို（public၊ private၊ protected）နှင့် ပြောင်းလည်းနိုင်ခြင်းကို （final၊ constant အစရှိသဖြင့် ဖော်ပြနိုင်ပါသည်။
အင်ဗာတာ အောက်မှာ ဖေါ်ပြထားတဲ့ ပုံမှာ constant current ဟာ constant-current dc link မှ တဆင့် converter2 သို့စီးဝင်ပြီး ထိုမှ (အစီအစဉ်တကျ gates များအဖွင့် အပိတ်လုပ်ခြင်း)3 phase မော်တာ ဆီသို့ဆက်သွယ် ပေးပါတယ်။ ဒီစံနစ် ကတော့ စတေတာဝါယာခွေ များမှာ hight efficiency ကိုရရှိမှာ ဖြစ်ပြီး (အင်ဗာတာက ထွက်တဲ့ ac ဗို့ ဟာ frequency နဲ့ အချိုးညီစွာ ပြောင်းလဲ ပေးတဲ့အတွက် stator flux ကိုတည်ငြိမ် စေပါတယ်)full break-down torque မှကာကွယ်ပြီး ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဝန်အားကိုသတ်မှတ်ချိန်အတွင်း လျှင်လျှင်မြန်မြန် ရောက် ရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။out put frequency ကို 20:1 ပြောင်းလဲ နိုင်ပြီး အမြင့်ဆုံး 1kHz ခန့်ရရှိပါတယ်။
ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ် ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ် () ကို ကွမ်တမ်ရူပဗေဒ သို့မဟုတ် ကွမ်တမ်သီအိုရီ ဟူ၍လည်း ခေါ်ဆိုကြသည်။ ကွမ်တမ်စက်ကွင်းသီအိုရီ သည်လည်း ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်၏ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ်သည် ရူပဗေဒ၏ အခြေခံကိုင်းခွဲတစ်ခုဖြစ်ပြီး အက်တမ်နှင့် အက်တမ်အောက်အမှုန်များဖြစ်သည့် ဖိုတွန်၊ အီလက်ထရွန် စသည်တို့နှင့် သက်ဆိုင်သော ဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ ကွမ်တမ်ဖြစ်ရပ်များသည် ပလန့်ကိန်းသေ (Plank's Constant) ၏ ဆတိုးကိန်းပြည့်များဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိရသည်။ အက်တမ်အောက် အမှုန်လောကတွင် စွမ်းအင်များ ဖလှယ်သည့်အခါ၊ ထုတ်လွှတ်သည့်အခါများတွင် စိတ်ကြိုက်ပမာဏဖြင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်း မရှိဘဲ ပလိန့်ကိန်းသေ၏ ဆတိုးအပြည့်ကိန်းဖြစ်သော ပမာဏများဖြင့်သာ ထုတ်လွှတ်သည်။ ၎င်းသည် စွမ်းအင်ကို သတ်မှတ်ထားသည့်ပမာဏများ(Quanta) ဖြင့်သာ ထုတ်လွှတ်သောကြောင့် ကွမ်တမ်မက္ကင်းနစ် (Quantum mechanics) ဟု ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်သည်။ ဤသဘောတရားသည် ရှေးရိုးရူပဗေဒ သဘောတရားဖြင့် မည်သို့မှ ရှင်းမပြနိုင်သည့် ကိစ္စဖြစ်သည်။
မြန်မာဘုရင့်တပ်မတော် The size of the regular standing army, the Palace Guards and the Capital Defense Corps, was in low thousands only, even in wartime. Even under Bayinnaung, the much celebrated soldier king whose reign was marked byaseries of constant military campaigns, the Capital Defense Corps was only about 4000 strong. In 1826, right after the First Anglo-Burmese War,aBritish envoy reportedacapital garrison of 4000 to 5000. In peacetime, the size was even smaller. In 1795, another British envoy found 2000 troops, including about 700 palace guards, at the capital Amarapura.
မြန်မာဘုရင့်တပ်မတော် The army's war strategy and fighting tactics generally remained fairly constant throughout the imperial era. The infantry battalions, supported by the cavalry and elephantry, engaged the enemy in the open battlefield. The arrival of European firearms did not lead to any major changes in battle techniques or transform traditional ideas of combat. Rather, the new weapons were used to reinforce traditional ways of fighting with the dominant weaponry still the war elephants, pikes, swords and spears. In contrast to European-style drill and tactical coordination, Burmese field forces generally fought in small groups under individual leaders.
ဟေလီယိုစဖီးယား The shock arises because solar wind particles are emitted from stars at about 400 km/s, while the speed of sound (in the interstellar medium) is about 100 km/s. (The exact speed depends on the density, which fluctuates considerably.) The interstellar medium, although very low in density, nonetheless hasaconstant pressure associated with it; the pressure from the solar wind decreases with the square of the distance from the star. As one moves far enough away from the star, the pressure from the interstellar medium becomes sufficient to slow the solar wind down to below its speed of sound; this causesashock wave.